Isizinda se-Ultrasonic se-polysaccharides esezingeni eliphakeme - i-Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Isizinda se-Ultrasonic se-polysaccharides esezingeni eliphakeme"
Ama-polysaccharides, abizwa nangokuthi ama-glycans, ayindlela yamakhethini ama-carbohydrate amade (isib. Isitashi, i-cellulose, ne-glycogen) omoleki bawo abasebenza ngama-molecule amaningi ashukela (monosaccharides) ndawonye. Inani lama-monosaccharides lingahluka kakhulu: Ama-polysaccharides angaba nama-10 ukuya kufinyelela ezinkulungwaneni eziyizinkulungwane ezingama-monosaccharides (amashukela molecule) ahlelwe ngamaketanga. Ama-monosaccharides ajwayelekile kuma-polysaccharides yi-glucose, i-fructose, i-galactose ne-mannose. Ukuba ama-carbohydrate e-polymeric, ama-polysaccharides angakhombisa ukuhleleka kwezakhiwo ezinamagatsha anamandla kakhulu.
Ama-polysaccharides atholakala kakhulu ezitshalweni, isb. Njengokudla kokusanhlamvu okusanhlamvu, amazambane kanye nezimbali zemidumba. Imicu yokudla okufana ne-pectin, inulin noma i-cellulose itholakala ikakhulu okusanhlamvu okugcwele, izigaxa zemifino, imifino nezithelo. Kepha futhi ekudleni okuvela ezilwaneni kutholakala amanani amancane ama-polysaccharides, isib. Glycogen ku-shellfish nesibindi sesilwane. I-manggestible fiber chitin ne-chitosan yayo etholakala ngokuyinhloko iyisakhi esiyinhloko kumagobolondo ama-crustaceans anjengamabala kanye nezimfanzi.
Ama-polysaccharides ayinkimbinkimbi ebalulekile kwezolimo. Amanye ama-polysaccharides ayimithombo eminyene yamandla (isib. Ushukela), amanye ayaziwa ngezakhi zawo zokulwa nokuvuvukala (isib. I-beta-glucans, glucomannans, arabinoxylans).
Ukuze wakhe amakhemisi wemithi, izithasiselo zokudla nemithi, ama-polysaccharides kumele akhishwe kuzinto ezingavuthiwe (isib. Okusanhlamvu, amakhowe okwelapha, amakhambi) futhi kugxiliswe emkhiqizweni ocebile kakhulu we-polysaccharide. Ukuthola ikhwalithi ephezulu ye-polysaccharide, indlela yokukhipha into esemqoka ekuhlukaniseni ama-polysaccharides ezitshalo.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela engafanele yokuhlukanisa eyedwa, esetshenziswa kabanzi embonini yokudla neyama-pharma. I-Sonication iphula izindonga zeseli futhi ikhiphe ama-polysaccharides agcinwe. Ama-polysaccharides avela kumakhowe okwelapha, okusanhlamvu, ama-algaes, ama-ginseng, ama-psyllium neminye imifino eminingi nezithelo sekukhishwe ngempumelelo kusetshenziswa izithambisi ze-ultrasonic.
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngezinhlelo ezinamandla zokukhishwa kwe-Ultrason ku-lab, ebhentshini kanye nezinga lezimboni. Zonke izinhloli ze-Hielscher ze-ultrasonic zingamandla, zakhelwe ukusebenza kwe-24/7 futhi zilula & kuphephile ukusebenza.
Funda kabanzi mayelana nokuthi isizinda se-ultrasonic singawuthuthukisa kanjani umkhiqizo wakho we-polysaccharide!